Marka la eego shuruudaha Qodobka L. 1152-2 ee Xeerka Shaqaalaha, qofna shaqaale looma ganaaxi karo, lama eryi karo ama laguma xukumi karo cabir takoor ah, mid toos ah ama mid aan toos ahayn, gaar ahaan xagga mushaharka, tababarka, dib udejinta. , meeleyn, u qalmid, kala soocid, dallacsiin xirfadeed, wareejin ama cusbooneysiin qandaraas ah, dhib ama u diiday in la mariyo ficillo soo noqnoqda oo anshax xumo ah ama markhaati u ahaa ficillada noocan oo kale ah ama lagu soo warramey iyo shuruudaha ee qodobka L. 1152-3, jebin kasta oo heshiiska shaqada ah ee ku timaadda tixgalinta qodobbada sidaas darteed waa madhan yihiin.
Kiis la xukumay bishii Sebtember 16, shaqaale loo kireeyay injineer naqshadeynta ayaa ku dhaleeceeyay loo-shaqeeyaha inuu si aan macquul ahayn ugala noqday shaqadii shirkad macmiil ah oo uusan la soo socodsiinin. sababaha. Wuxuu ku muujiyay warqad uu ushaqeynayo loo shaqeeyaha inuu u tixgaliyay naftiisa "xaalad ku dhow dhibaataynta". Sidoo kale boostada, shaqabixiyuhu wuxuu ugu jawaabay "wada hadalka aan ku filnayn ama xitaa maqnaashaha macmiilka", kaas oo "saameyn xun ku yeeshay tayada alaab keenista iyo ixtiraamka waqtiyada la keenayo", ayaa sharaxay go'aankan. Ka dib isku dayo badan oo aan lagu guuleysan oo loo shaqeeyaha inuu u yeero shaqaalaha si uu u sharaxo
Kadeedka akhlaaqda, shaqaale xumida shaqaalaha iyo dejinta shuruudaha khilaafka July 10th, 2021Tranquillus
READ Shaqooyinka xiisadda: saxeexa jaantusyada horumarinta shaqada iyo xirfadaha qaybaha hilibka - charcuterie farshaxan iyo roodhida - macmacaanka farsamada
horeTababbarka PowerPoint 2019: aasaasiga
socdaTababbarka Powerpoint 2016 VBA: Tilmaamaha Dhameystiran